News from saturngod.net - Saturngod | What's on my mind
Saturngod - saturngod.net - Saturngod
Sar 1.5	23 Aug 2013 | 09:36 pm
Sar ကို Dropbox feature ထည့်မယ်ဆိုပြီး ပြင်လိုက်တာ Dropbox feature ထည့်တဲ့ အဆင့်မရောက်သေးပဲ အခြား bugs တွေ UI တွေ အကုန်ပြန်ပြင်ပြီးတော့ 1.5 ထုတ်ထားပေးပါတယ်။ fixed Virtual Keyboard 1.5 မှာ မြန်မာ key...
Pogoplug Series 4	22 Aug 2013 | 07:06 am
Amazon မှာ Pogoplug Series4ကို စျေးသက်သာတာနဲ့ ဝယ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ မူရင်းစျေးက US$99 ရှိပြီး အခု စျေးချနေတာ US$ 39.99 နဲ့ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ Pogoplug ကို ဝယ်ချင်တာတော့ ကြာပေမယ့် စျေးကြီးတာကြောင့် မဝယ်ဖြစ်ဘူ...
MMFontFallBack Mac App	20 Aug 2013 | 03:10 pm
Mac OSX 10.8 မှာ မြန်မာစာ ပါဝင်လာပြီးတော့ ဇော်ဂျီ ကောင်းစွာမပေါ်တော့လို့ သူ့မှာ ပါတဲ့ မြန်မာစာကို ဖျက်ပစ်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် blog ရေးတဲ့အခါမှာလည်း OS မှာ ပါဝင်တဲ့ MyanmarMN က စာလု...
SGDoc	13 Aug 2013 | 09:15 pm
ဒီနေ့ ရုံးမှာ အလုပ်အတွက် API request documentation တွေ ပြန်စစ်နေတုန်း MS Word မှာ API request တွေကို ရေးထားတာ ဖတ်ရခက်လိုက်တာ လို့ ထင်လာတယ်။ ဘာထွေထွေထူးထူး မှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Request နဲ့ Response တွေပဲ...
Six Years Old	6 Aug 2013 | 09:01 pm
ဒီလ ၁၁ ရက်နေ့ ဆိုရင် blog ရေးတာ ၆ နှစ် ရှိပြီ။ စရေးကာစကတော့ ကျောင်းက အကြောင်းလေးတွေ ရေးချင်တာ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီ အချိန်တုန်းက blogspot ဆိုတာကြီးက ခေတ်စားတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ဘာလဲ သိရအောင် စမ်းရေးနဲ့ စရေး...
Mobile App Startup Bubble ?	1 Aug 2013 | 10:01 pm
ဒီနေ့ Flud က August 8 ရက်နေ့ ရောက်ရင် ပိတ်ပြီဆိုပြီးတော့ mail ရောက်လာပါတယ်။ Flud ရှိခဲ့တာ ၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ မှတ်မှတ်ရရ Pulse နဲ့ အပြိုင် Flud ကို ထွက်ခဲ့တာပါ။ Pulse ကတော့ Linkedin က ဝယ်သွားပြီးတော့ Flud...
7 , NSMag Aug Issue	28 Jul 2013 | 10:59 am
ဒီလ Aug issue အတွက် ၁ လ လောက် ကြိုပြင်ခွင့်ရလိုက်တယ်။ NSMag ထွက်ပြီးတာနဲ့ မကြာခင်မှာ iOS7နဲ့ Xcode ကို Apple က မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ iOS7မှာ အများက မျှော်လင့်ထားသလို flat UI ဖြစ်သွားပေမယ့် လူတော်တော်မျ...
Meteor JS	25 Jul 2013 | 01:45 pm
အခုတလော Meteor JS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ဖတ်ဖြစ်နေတယ်။ Meteor JS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ version 0.4 လောက် က စပြီး သိတာလို့ ဆိုရမယ်။ Daily JS ကနေ သိတာနဲ့တူတယ်။ စတွေ့ကာစတော့ တော်တော်မိုက်တယ်။ သို့ပေမယ့် secu...
Translation	20 Jul 2013 | 08:10 pm
ဘာသာပြန်တဲ့ အလုပ်ဟာ လွယ်တဲ့ အလုပ်မဟုတ်မှန်း ဒီနေ့ Airmail ကို ဘာသာပြန်မှပဲ ပိုပြီး သဘောပေါက်လာတယ်။ အရင်ကတော့ သူများ ဘာသာပြန်ထားတာတွေကို ကြည့်ပြီး ဖတ်ရတာ ထောက်တယ်။ အဓိပ္ပာယ်လွဲတယ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး...
Why I am not using baker framework ?	10 Jul 2013 | 08:44 am
NSMag ကို စပြီး ဖန်တီးဖို့အတွက် လိုအပ်တာတွေကို ရှာဖွေပြီး research လုပ်တုန်းက Baker ကိုလည်း တွေ့ဖြစ်တယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်အတွက် မဆိုးဘူးဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ feature တွေ မဖန်တီးပေးနိုင်ဘူး။ သူက op...
Saturngod, saturn god, zawgyi on itouch, zawgyi keyboard ipad 4.2, notepad json, zawgyi font for ubuntu, saturn myanmar, myanmar unicode for android, how to jailbreak itouch, cydia.macforus.com